कट्रिनाका लागि किन बन्यो ? रणवीरसँगको ब्रेक अप गिफ्ट - Nayapul Online
कट्रिनाका लागि किन बन्यो ? रणवीरसँगको ब्रेक अप गिफ्ट
मंसिर २०, नायिका कट्रिना कैफ र नायक रणवीर कपुरको ब्रेकअप अब पुरानो भैसक्यो । कट्रिना अहिले आफ्नो काममा केन्द्रित छिन् भने रणवीर नायिका आलिया भट्टसँगको प्रेममा छन् । रणवीर र कट्रिनाले करिब ६ बर्ष प्रेम गरेका थिए । सो समयमा कट्रिना काम भन्दा गसिपमा बढी अल्झिएकी थिइन् । यसैले पनि उनै कैफले रणवीरसँगको ब्रेकअपको घटनालाई जिन्दगीको सबैभन्दा सुन्दर गिफ्ट भनेकी छिन् ।
उनले भनिन्–‘ब्रेकअपपछि मेरो जिन्दगी पुरा रुपमा बदलियो । म अहिले आफूमाथि नै बढी केन्द्रित छु । जब तपाइको ध्यान आफू माथि नै हुन थाल्छ त्यसपछि तपाइलाई आफ्नो बारेमा धेरै कुरा थाहा हुन थाल्छ । यसपछि तपाइलाई आफू कस्तो मानिस हुँ भन्ने थाहा हुन्छ ।’
कट्रिनाले अगाडि भनिन्–‘अहिले मलाई लाग्छ कि त्यो ब्रेकअप मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा सुन्दर उपहार थियो । किनकी मलाई त्यसपछि नै थाहा भयो कि मैले आफ्नो जिन्दगीलाई कुन बाटोमा लगिरहेको छु । अहिले मैले हरेक कुरालाई नयाँ कोणबाट देख्न थालेकी छु ।’
कैफले आफ्नो कुनै पनि निर्णयमा दुःखी नहुने बताइन् ।
अमेरिकी लडाकु विमान आपसमा ठोक्किएर दुर्घटना
अनमोल अमेरिका नजानुको कारण यस्तो छ
नेपाल आइडलबाट बाहिरिइन् ‘गोल्डेन माइक’ विजेता